विस्तृत निर्देशनहरू: कसरी रेकर्डिङको बनाउन "Bandikam" कन्फिगर गर्न
कहिलेकाहीं, एक व्यक्ति एक नयाँ कार्यक्रम थाह हुन्छ, त्यो कसरी इन्टरफेस धेरै विरोधी छ, विशेष गरी यदि, यो काम गर्न बुझेनन्। को पाठ्यक्रम, कि उत्तरार्द्ध, मा "Bandikame" यो छैन, तर अरू सबै कुरा आफ्नो पीसी मनिटर बाट भिडियो खिच्ने प्रयास गर्न निर्णय गरेको छ जो हरेक नव आगन्तुक, गर्न आउँछ।
यस लेखमा हामी राम्ररी कसरी कुरा हुनेछ "Bandikam" कन्फिगर लेखन खेल। हामीलाई सबै निर्देशन भविष्यमा सही समायोजन कार्यक्रम मा विस्तृत हुन् साथै, भिडियो र अडियो दुवै कन्फिगर गर्न, भिडियो शूटिंग पछि मात्र उच्च गुणवत्ता दृश्य प्राप्त।
जहाँ आफ्नो कम्प्युटर मा कार्यक्रम डाउनलोड गर्न
सबैले हरेक दिन बाहिर यसरी यो संक्रमित, कि, सिद्धांततः, तपाईंले आफ्नो पीसी गर्न डाउनलोड गर्न सक्छन् भाइरस को एक विशाल संख्या इन्टरनेटमा राखिएको छ थाह छ। तपाईं अझै पनि के भन्नुभयो भइरहेको छ बुझ्न भने, त्यसपछि सबै सरल छ। अविश्वसनीय स्रोत विश्वास गर्न "Bandikam" विकासकर्ता को आधिकारिक साइट मात्र डाउनलोड र गर्न आवश्यक भन्ने तथ्यलाई।
प्रत्येक आक्रमणकारीले कार्यक्रम नै डाउनलोड गर्न सक्छन्, र त्यसपछि एक भाइरस गरेर यसलाई परिमार्जन, र नेटवर्क पुनः राखे, अधिक लेख उपशीर्षक गर्न संभावना छ Bandikam "बिल्कुल मुक्त" सोभ्को उपभोक्ताहरु "डाउनलोड गर्नुहोस्" तुरुन्तै चारा गर्न हतारिएको।
निस्सन्देह, "Bandikam" को लोड संस्करण को आधिकारिक वेबसाइटले प्रदर्शन हुनेछ, र तपाईं यसैले पूर्ण उत्पादन, बोल्न, प्राप्त, तर अझै पनि हुनेछ आफ्नो कम्प्युटर संक्रमित खराब सफ्टवेयर पर्दाफास गर्न ताकि, कार्यक्रम किन्न सल्लाह।
हामी औंल्याए पछि ठीक तपाईं कार्यक्रम डाउनलोड गर्न आवश्यक जहाँ, तपाईं बारेमा कथा गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ "Bandikam" सेट गर्न कसरी लेखन खेल।
बाहिर "Bandikam" मा भिडियो सेटिङ पूरा गर्न तपाईं हाम्रो आँखा मार्गदर्शन गर्न विशेष गरी यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम undergo गर्न आवश्यक छैन। अब हामी बाहिर तपाईं आफ्नो मनिटर संग शूटिंग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ मिनेट को बस एक जोडी भिडियो को समायोजन ले कसरी विस्तार विश्लेषण।
त्यसैले, तपाईं आवश्यक सबै - छ:
FPS ट्याब, बायाँ साइडबार मा स्थित छ जो स्विच गर्न कार्यक्रम खोल्ने पछि।
मेनु ओभरले FPS ठ्याक्कै जहाँ फ्रेम दर सूचक स्थित गरिनेछ निर्दिष्ट गर्न जाँच दायाँ "स्क्रिनमा स्थिति" र प्रतिमा। यो रेकर्डिङ समयमा तपाईं प्रति सेकेन्ड धेरै फ्रेम हाल रेकर्ड कसरी ट्र्याक आवश्यक छ।
को FPS सीमित मेनु वस्तु तपाईं आफ्नो कम्प्युटर को शक्ति को निश्चित छैन भने 60 30 देखि एक मान प्रविष्ट गर्ने अधिकार को रूप मा "सीमा सेट" चयन गर्नुहोस्, 30 FPS स्थापना, यो एकदम यसको प्रदर्शन वृद्धि हुनेछ।
सामान्य मा, यो अब तपाईं लेखन खेल "Bandikam" कन्फिगर गर्ने बारे अलि बढी जानकारी थाहा छ, तर सबै होइन, त्यो भिडियो समायोजन गर्न गरिन आवश्यक सबै छ।
अब हामी "Bandikame" ध्वनि मा सेट गर्न कसरी हेर्न, त्यसैले तपाईं केवल रेकर्ड भिडियो।
ध्वनि - उनको मानक विकल्प देखि कार्यक्रम डाउनलोड पछि भिडियो रेकर्डिङ अभिन्न भाग, कि बाहेक असक्षम रेकर्डिङ सिस्टम ध्वनि छ। अब हामी बस यसलाई कसरी मिलाउने विश्लेषण।
अडियो रेकर्डिङ सक्षम गर्न, तपाईंलाई आवश्यक:
रेकर्ड सेटिङहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो गर्न, कार्यक्रम को मुख्य स्क्रिनमा, ट्याब "भिडियो" जाने र "रेकर्ड", "सेटिङ" बक्समा बटन थिच्नुहोस्।
त्यसपछि देखिने सञ्झ्याल, एक चेक मार्क अर्को "ध्वनि रेकर्डिङ" गर्न राखे।
तपाईं मुख्य एकाइ चयन जहाँ क्षेत्र, मा, आफ्नो वक्ता को नाम संकेत गर्छ।
थप उपकरणहरू निर्दिष्ट गर्दछ क्षेत्र, मा, माइक्रोफोन को नाम संकेत (तपाईं आफ्नो आवाज रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने)।
अब तपाईं लेखन खेल "Bandikam" कन्फिगर गर्ने बारे लगभग सबै थाहा छ। तर सबै छ।
अब रेकर्डिङ र भिडियो को ध्वनि गुणस्तर कसरी सुधार गर्न बारेमा कुरा गरौं। यसो गर्न, तपाईं मात्र एक चोटी मा सबै सूचकहरू उठाउनु हुनेछ।
प्रारूप सेटिङहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यस AVI फाइल ढाँचा राखे।
मा "आकार" पूर्ण आकार निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
60 FPS प्रविष्ट गर्नुहोस्।
100 - गुणस्तर निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
अधिकतम मूल्य गर्न बिटरेट टिप्न।
अधिकतम गर्न फ्रिक्वेन्सी को मूल्य बढ्छ।
अब तपाईं रेकर्डिङ खेल "Bandikam" कन्फिगर गर्ने बारे सबै थाहा छ, तपाईंलाई सजिलै रेकर्डिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
आय र व्यय को लेखा लागि सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम
कुकीहरू के हुन्? म मेरो ब्राउजरमा कुकीहरू कसरी सक्षम बनाउने?
कम्प्युटर वा जीवन बचत को लागि के कार्यक्रम आवश्यक छ ...
घर लागि मिडिया प्लेयर को विकल्प बनाउन
प्रयोग गर्न Plex मिडिया सर्भर? स्थापना Plex मिडिया सर्भर
हामी PS3 कसरी फ्लैश सिक्न
Snowshoe बिरालोहरु, वा बिरालो-पांडा
मास्को मा आवास विभाग र आवास
नुस्खा हर्कुलेसक्लस्टर काशी
Sociogenesis - समाज को मूल को विज्ञान
Tahajjud प्रार्थना महिला कसरी गर्न?
बांधन eaves र यसको embodiments
यहूदी tsimes - यो के हो?
कसरी घर स्टाइलिश, छिटो, उच्च गुणवत्ता मा पर्खालहरु रंग गर्न
रूस मा जेल सिस्टम
Odintsovo मा पेंशन निधि कहाँ छ?
जाडो प्राकृतिक घटना: उदाहरणहरू
गुप्त एपिडर्मेरोफाइटिया उपचार